Abakhiqizi bensimbi yensimbi - Ifektri yaseChina Yezinsimbi, Abahlinzeki
Izilinganisi zokuxhuma zisetshenziselwa ukuhlanganisa ama-insulators abe yizintambo, kanti ama-insulators entambo axhunyiwe futhi amiswe engalweni yesiphambano sombhoshongo. Ukumiswa kocingo kanye nocingo lwenkinga kanye nokufakwa ngaphakathi Ukuxhunywa kocingo, ukuxhunywa kwezintambo zekhebula nemibhoshongo yezigxobo nakho kusebenzisa ukufakwa kokuxhuma. Nokufakwa XYTower elenga ezimise okwe-ring abakhiqizi bezingubo ezixhuma kakhulu, ezaziwa nangokuthi izingxenye zokulengiswa ngocingo. Lolu hlobo lokufakwa lusetshenziswa ...
Ukumiswa kokomisa kusetshenziselwa ukulungisa ucingo entanjeni yokuvikela noma ukulengisa ucingo lokuvikela umbani. Emapalini aqondile, ingasetshenziswa futhi ukuxhasa ukuqhutshwa kokushintshwa kanye nokushintshana kokuqina ezigxotsheni zokushintsha. Ukulungiswa kwejump yombhoshongo wasekhoneni. I-clamp kanye nabagcini bayinsimbi ethambile, izikhonkwane ze-cotter ziyinsimbi engagqwali, ezinye izingxenye ziyinsimbi. Zonke izingxenye zensimbi zishisiwe.
Ukufakwa kwamandla yizo zonke izinhlobo zezesekeli ezazisebenzisa ukuxhuma noma ukuxhasa idivayisi kagesi ukuze ulayini wepali uzobona ukulethwa kwamandla. Ukufakwa kwamandla kubizwa nangokuthi izesekeli zolayini wamandla, i-hardware yesigxobo samandla, okufakwa kulayini kagesi, ukufakwa kwamandla kagesi. Ukufakwa kwamandla kunesici esingezansi:
• Amandla okuphuka okuphezulu
• Indawo ebushelelezi
• Usayizi onembile
• Unomphela ngekhwalithi
Ama-insulators amadivayisi afakwe phakathi kwabaqhubi bamandla ahlukahlukene noma phakathi kwabaqhubi nezinto ezingaphansi komhlaba, futhi bangamelana nokucindezela kwamandla namandla. Kuyisilawuli esikhethekile sokuhlukanisa izinto ezingadlala indima ebalulekile emigqeni yokudlulisela ngaphezulu. Eminyakeni yokuqala, ama-insulators ayesetshenziselwa kakhulu izigxobo ze-telegraph. Kancane kancane, ama-insulators amaningi amise okwe-disk ayilengiswa kolunye uhlangothi lombhoshongo oxhuma ngamandla kagesi. Isetshenziselwe ukukhulisa ibanga le-creepage. Ngokuvamile kwakwenziwa ngengilazi noma ngobumba futhi kwakubizwa ngokuthi yisivikelo. Ama-insulators akufanele ahluleke ngenxa yezingcindezi ezahlukahlukene ze-electromechanical ezibangelwa izinguquko kwezemvelo nezimo zomthwalo kagesi, ngaphandle kwalokho ama-insulators ngeke abe nomthelela omkhulu futhi azolimaza ukusetshenziswa nokusebenza kwempilo yomugqa wonke.
Idatha yobukhulu kanye neyobuchwepheshe ye-33kv pin post composite insulator TYPE: FP-33/8 voltage Rated (KV) Rated mechanical mechanical tension load (KN) Structure height (mm) H Ibanga lokuvikela (mm) h Min ibanga le-creepage distance (mm) I-1min imvamisa yamandla imelana namandla we-voltage (kv) Umbani ogcwele umbani wokumelana namandla (inani eliphakeme) 33 8 417 338 1160 90 200 2. Izinto ze-33kv pin post composite insulator 1) .I-Silicon Rubber yamasheya / izindlu. 2) .I-Glass-fiber epo eqinisiwe ...
Uqinisa ngocingo (uvalwe ngocingo, uhlobo ngocingo, dead-ekupheleni ngocingo) libhekisela hardware esetshenziswa ukulungisa ucingo ukuthwala ukungezwani yocingo kanye hang ucingo intambo ukungezwani noma umbhoshongo. Ama-clamps we-Strain asetshenziselwa amakhona, izinhlayiya, nokuxhumeka kokugcina. Intambo yensimbi egqoke i-aluminium egqoke inamandla amakhulu ngokweqile, ayikho ingcindezi egxilile, futhi ivikela ikhebula le-optical futhi isize ekwehliseni ukudlidliza. Isethi ephelele ye-optical cable tensile hardware ifaka phakathi: ukuqina pre-t ...